ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်စက်ရုံ ရပ်တန့်ပေးရန် သမ္မတထံ စာပို့
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း > ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်စက်ရုံ ရပ်တန့်ပေးရန် သမ္မတထံ စာပို့
ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်စက်ရုံ ရပ်တန့်ပေးရန် သမ္မတထံ စာပို့	ကွန်းချမ်း	| သောကြာနေ့၊ မေလ ၀၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၂၁ မိနစ်	စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ စတင် လည်ပတ်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် ကော့သောင်းမြို့ရှိ ကျောက်မီးသွေး လောင်စာသုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံကို ရပ်တန့်ပေးရန်အတွက် ကြာသပတေးနေ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတထံသို့ ဒေသခံများက အသနားခံစာ ရေးသားပို့ပေးခဲ့သည်။ကော့သောင်းမြို့ရှိ ရပ်ကွက် ၁ဝ ရပ်ကွက်အနက် ၉ ရပ်ကွက်မှ ဒေသခံ ၆၃ ဦးက လက်မှတ်ထိုးကာ သမ္မတကြီးထံ လက်မှတ် ရေးထိုးပေးပို့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။“နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံလို့ လိပ်မူပြီးတော့ ပို့တာ။ ဒါပေမယ့် ပို့တဲ့သူ နေရာမှာတော့ ကော့သောင်းမြို့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူများလို့ ရေးထားတော့ စာတိုက်က အဲလိုပို့ရင် မရောက်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော့်လိပ်စာနဲ့ပဲ ပို့လိုက်တယ်” ဟု ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) တနင်္သာရီတိုင်း စည်းရုံးရေးမှူး ကိုသန်းထွန်းက ပြောသည်။သမ္မတကြီးထံ ပေးပို့သည့် အသနားခံစာတွင် ကျောက်မီးသွေး လောင်စာသုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ စတင် လည်ပတ်တော့မည် ဖြစ်ပြီး စက်ရုံ၏ ဆိုးကျိုးများကို သမ္မတကြီး အနေနှင့် သိရှိပြီးလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ ရနောင်းမြို့ ထမ်ဖရား ရပ်ကွက် စက်မှုဇုန် ငါးမှုန့်ကြိတ်စက်မှ ထွက်ရှိလာသည့် အနံ့အသက်ကို ၁၀ မိုင်ခန့် ဝေးသည့်ကော့သောင်းမြို့ထိပင် ရှုရှိုက်နေရကြောင်း၊ သမ္မတကြီး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ကော့သောင်း ပြည်သူများ စောင့်စားနေကြကြောင်း စသည့် အချက် ၁၆ ချက် ပါဝင်သည်ဟု သူက ပြောသည်။ယခင် တနင်္သာရီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးခင်ဇော် လက်ထက်က ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီး ‘သန်းဖြိုးသူ’ သတ္တုတူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ လိမိတက် ပိုင်သည့် ထိုစက်ရုံကို ၂၀၁၁ ခု နှစ်လယ်ခန့်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကာ ယခုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင် လည်ပတ်မည် ဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင် ၈ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လွှတ်မည့် ထိုစက်ရုံကို ကော့သောင်းမြို့ အေးရိပ်ငြိမ်နှင့် ရွှေပြည်သာ ရပ်ကွက်ကြားတွင် တည်ဆောက်ထားပြီး ၁၆ မဂ္ဂါဝပ်ထိ တိုးချဲ့သွားမည်ဟု ကုမ္ပဏီ၏ ပြောဆိုချက်ကို ကိုးကားပြီး ဒေသခံများက ပြော သည်။ထိုစက်ရုံသည် လူနေအိမ်နှင့် ပေ ၅၀ ခန့်သာ ကွာဝေးပြီး မီးခိုးခေါင်းတိုင်မှာလည်း ပေ ၄၀ ခန့်သာ မြင့်ကာ ထိုနယ် တဝိုက်တွင် ရွာသွန်းသည့် မိုးရေများက စက်ရုံနှင့် နှစ်ဖာလုံကျော်သာ ဝေးသည့် ယင်းဝါ ရေလှောင်ကန်သို့ စီးဝင်ပြီး မြို့ခံများက ထိုရေကို အဓိကထား သောက်သုံးကြသည့်အတွက် ကန့်ကွက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများကပြော သည်။
မန္တလေးမြို့တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ရန် တင်ဒါခေါ်	ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးခွင့် ပုဂ္ဂလိကသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးတော့မည်	လျှပ်စစ်မီးများ ပြတ်တောက်မှုကြောင့် ဒီဇယ်ဈေး တက်လာပြန်	နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်	အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် မြန်မာသမ္မတတို့ သီးသန့်တွေ့ဆုံ	သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အား အိန္ဒိယ လုပ်ငန်းရှင်များက ညစာစားပွဲဖြင့် ဧည့်ခံမည်	ဦးသိန်းစိန် ဖိတ်ကြားချက်အရ OIC အတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာပြည် လာမည်	Who is Online
We have 172 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved